Fa velon’ahiahy ny amin’ny hoaviny koa ireo mpiasa aman’arivony miasa amin’ireo orinasa mpanamboatra savony miisa 16 eto Madagasikara. Farafahakeliny orinasa miisa 11 amin’ireo no manafatra akora « bondillon » hanamboarana savony. Hampakatra ny masokarenan’ny savony vokarina eto an-toerana ny tataon-ketra 20% alaina amin’io akora io, izay tataon-ketra fampihatra amin'ireo vokatra efa vita sy jifaina mivantana. Tsy ho afaka hifaninana eo amin’ny tsena ny savony vita eto an-toerana, miohatra amin’ireo savony afarana vokarin’ireo firenena eo anivon’ny vondrom-pifanakalozana COMESA, izay miditra eto Madagasikara tsy mandoa haba, ary mitobaka mameno tsena.
« Rehefa tsy afaka hifaninana ny vokatra, dia hitotongana ny fidiram-bola, fatiantoka no hiditra ary hitarika fikatonan’ny orinasa izany », hoy ireo mpandraharaha amin’io sehatra io. « Maro ny ho very asa » hanampy isa ireo tsy an’asa raha sanatria tonga amin’izany, ary « fianakaviana aman’arivony ihany koa no ho tra-pahasahiranana. Manginy fotsiny ny fiantraikany ratsy amin’ny toekarem-pirenena », hoy izy ireo.
Isan-taona i Madagasikara dia manamarika ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny fanasan-tanana amin’ny savony, rehefa 15 oktobra. Raha hiaka-bidy ny savony noho ity tataon-ketra 20% ity, ny rano anefa efa manahirana ny mponina ny mahazo azy, ary raha mba mahazo dia maloto indray koa ; koa vokatra toy inona no ho azo amin’ny toe-javatra toy izany, hoy ireo mpanentana momba ny fahadiovana sy fidiovana.
« Voahevitra ve ny nandraketan’ny fanjakana an’io tataon-ketra 20% alaina amin’ny « bondillon », izay akora fanaovana savony », hoy ny maro an’isa amin’ireo mpandraharaha mpanamboatra savony. Mametra-panontaniana ihany koa ireto farany ny amin’ny fihetsiky ny SIM (Sendikan’ny Indostria eto Madagasikara) izay tokony hitsinjo ny tombontsoan’ny orinasa sy ny toekarem-pirenena, nefa toa manohana ny hampiharana an’io tataon-ketra 20% io, na dia fantatra izao aza ny ho fiantraikany ratsy amin’ny toekarem-pirenena, sy ny sosialy noho ny amin’ny mety ho fahaverezan’asa sy ny fandotoana ny tontolo iainana haterany.
Nitondra fanitsiana ary nampihena io tataon-ketra io ho 10% ny solombavambahoaka tamin’ny 30 novambra 2019. Mandinika ary handany ny lalàna hifehy fitantanam-bolam-panjakana taona 2020 ny Antenimierandoholona amin’ity herinandro ity, ka isintonan’ireo mpandraharaha maro an’isa mpamokatra savony ny sain’ireo Loholona mba hijery ny tena mahasoa ny firenena, dia ny toekarena sy ny sosialin’ny vahoaka fa tsy ny « politika » no haka ny toeran’ny savony.
(Sary Gasypatriote: Bondillon akora fanamboarana savony)
Savonnerie SEIM Tanjombato »